China Fambolena karaoty voatetika sy orinasa | Nongchuanggang
Karaoty Meshed dia karazan-tsakafo vita aorian'ny nanamboarana ny karaoty, ny carotene ao anatiny dia afaka manatsara ny hematopoietic an'ny vatan'olombelona, ​​mampihena ny fisian'ny anemia sy ny ra mangatsiaka, ankoatr'io karazan-tsakafo io dia tsy manankarena potasioma, izy io koa dia singa iray lehibe mitazona ny fahasalaman'ny olombelona.
Ny vitamina A amin'ny karaoty dia afaka mampiroborobo ny fifohana kalsioma, ary ny calcium dia singa ilaina amin'ny fahasalaman'ny taolana, noho izany ny fihinana fotaka karaoty dia afaka manatsara ny haavon'ny taolana, mampihena ny fisian'ny taolana sy ny fiaraha-miasa. Ho fanampin'izany, ny fotaka karaoty dia mbola misy fiatraikan'ny laxative amin'ny tsinay embryon, ny fibre dietary ao anatiny dia afaka manalefaka ny tsinay maloto, afaka manafaingana ny fiterahana sy ny fivoahana.
Faharoa, misy tombony lehibe 3 ho an'ny zazakely mihinana karoty puree.
1, arovy ny vavony, sorohina ny fivalanana sy ny soritr'aretina hafa. Ny rafitry ny vavonin-kibo amin'ny zaza dia marefo, indrindra rehefa tratry ny sakafo ivelany. Raha be loatra ny sakafo mifameno na tsy ampy sakafo ny sakafo mifameno, dia mety hiteraka tsy fahazoana aina amin'ny vavonin-kibo sy ny soritr'aretin'ny fivalananana. Ary ny karaoty dia misy pectine, izay afaka misoroka ny fivalanana. Ka ny famahanana ny karaoty voadio ny zanakao dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny fivalanana.
2. Mitroka otrikaina ary manatsara ny fahasalamana ara-batana. Ny zaza mihinana fotaka karaoty dia afaka manampy vitamina A ampy ary ny singa ilaina amin'ny vatan'olombelona, ​​mba hanatsarana ny fahasalaman'ny zaza dia tena manampy.
3. Mahatsapa fahafaham-po ary miomana amin'ny fanalana zaza. Ny karaoty voadio dia afaka manampy ny zaza hahatsiaro ho feno rehefa mihena tsikelikely ny habetsaky ny rononon-dreny.
Manaraka: Vovoka karaoty